Sunday September 20, 2020 - 13:38:02 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ugu yaraan 30 ruux oo shacab ah ayaa dhintay tobanaan kalane dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii ay diyaaradaha dagaalka xukuumadda Kaabuul ay duqeeyeen deegaan uu ka jiro maamul islaami ah.
Degmada Khaan Abaad oo ah goobta ay duqeyntu ka dhacday waxaa laga dareemayaa burbur xooggan, ilo wareedyo deegaanka ah ayaa sheegay in duqeyntu ay haleeshay isku imaatinno madani ah waxaana dhici karta in khasaaruhu ay intaas kasii bataan.
diyaarado dagaal oo dowladda Mareykanka ay ugu deeqday xukuumadda camiilka ah ayaa la sheegay in ay si aad ah uduqeeyeen dhismayaal ay dad shacab ah ku sugnaayeen, goob joogayaal ayaa wakaaladaha wararka u sheegay in ay arkeeyn meydadka 16 qof oo ubadan carruur iyo haween kuwaas oo daadsanaa goobta ay musiibadu ka dhacday.
xukuumadda camiilka ah ee fadhigeedu yahay magaalada Kaabuul ayaa fagtii hore ee dhacdadan isku dayday in ay warbaahinta ka gaddo in goobta la duqeeyay ay aheyd mucaskar ay leeyihiin dagaalyahannada Taliban balse markii dambe waxaa goobta gaaray wariyaal sidaas ayuuna ku fashilmay isku daygii lagu qarin lahaa jariimadan aadka ufoosha xun.
War rasmi ah oo kasoo baxay Taliban ayaa lagu sheegay in 40 qof shacab ah ay ku dhinteen duqeyntan bahalnimada ah, arrimahan waxay imaanayaan xilli magaalada Dooxa ee wadanka Qadar ay dhowaan ka furmeen wadahadallo udhaxeeyay dhinacyada ku dagaallamaya Afghanistan